Kaydinta Tallaalka Shiinaha warshad qaylo qallaji biomedical qalabka bangiga dhiigga | CSCPOWER
Kaydinta tallaalka qalabka bangiga dhiigga ee bayoolajiga kuleylka ah cryoch
Faahfaahin Degdeg ah Heerkulka: -5 ℃ ~ -80 ℃ Awood (W): 5kw-200kw Cabbirka (L * W * H): sida ku cad dammaanadda baahida macaamiisha: 1 sano Warshadaha Khuseeya: Hoteellada, Dukaamada Waxyaabaha Dhismaha, Dukaamada Dayactirka Mashiinka, Soo-saaridda Warshad, Warshad Cunto & Cabitaan, Beeraha, Makhaayada, Isticmaalka Guriga, Tafaariiqda, Dukaanka Cuntada, Tamarta & Macdanta, Dukaamada Cuntada & Cabitaanka Xaaladda: Meel Cusub oo Asal ah: Fujian, Magaca Calaamadda Shiinaha: Voltage CSCPOWER: 380V / 400V / 415V / 440V / 480V Miisaanka: 500kg-20000kg Shahaadada: C ...
Heerkulka: -5 ℃ ~ -80 ℃ Awood (W): 5kw-200kw
Warshadaha Khuseeya: Hoteelada, Dukaamada Waxyaabaha Dhismaha, Dukaamada Dayactirka Mashiinka, Warshad Soosaarka, Warshada Cuntada & Cabitaanka, Beeraha, Makhaayada, Isticmaalka Guriga, Tafaariiqda, Dukaanka Cuntada, Tamarta & Macdanta, Dukaamada Cuntada & Cabitaanka Xaaladda: Cusub
Goobta Asalka: Fujian, Shiinaha Magaca Brand: CSCPOWER
Danab: 380V / 400V / 415V / 440V / 480V Miisaanka: 500kg-20000kg
Shahaadada: CE ISO Adeegga iibka kadib ayaa la bixiyay: Qalabka dayactirka ee bilaashka ah, rakibaadda goobta, hawlgelinta iyo tababarka, Dayactirka iyo adeegga dayactirka, Taageerada farsamada Video, Taageerada khadka tooska ah
Nooca alaabta: Dhis Qaboojiyeyaasha Qolka
Kartida Bixinta: 30 Set / Setets per Month
Faahfaahinta Baakadaha: xirxirida badaha caadiga ah
Tirada (Dajisaa) 1 - 2 > 2
Est. Waqti (maalmo) 20 In lagu gorgortamo
CSCPOWER Bixi dhammaan noocyada
1 Qaybaha Qolka Qabow
Qeybta dhameystiran ee qaboojinta qolka qabow waxaa ka mid ah 4 qaybo waaweyn
1. Fiilooyinka keydinta qabow
2. Qaboojiyaha hawada
3. Unuga isu-ururiya
2 Codsiga Qolka Qabow:
Waxaa si weyn loogu isticmaalaa warshadaha geedi socodka cuntada, warshada caanaha, warshada dawooyinka, warshada kiimikada, bakhaarka khudradda iyo khudradda, keydinta ukunta, hudheelka, dukaamada waaweyn, isbitaalka, bangiga dhiigga, ciidamada iyo shaybaarka
3 .qolka qabow qabowgu wuxuu leeyahay astaamaha soo socda
1. Muuqaal Wanaagsan: Gudiga dahaadhka iyo qaabdhismeedka ayaa lagu heli karaa daraasiin midabyo ah kuwaas oo lagu soo dooranayo is waafajin lagu qanco leh qaababka kala duwan ee dhismayaasha
2. Nadiifinta: Polyurethane ama polystyrene oo leh kuleyl kuleyl yar iyo awood sare ayaa la adeegsadaa, iyadoo lagu gaarayo waxqabadka dahaadhka wanaagsan.
3. Muddo dhisme oo gaaban
4. Rakibaadda degdegga ah
5. Xaaladaha nadaafadda jirka ee cuntada ku jira gudaha bakhaarada qabow waxay ku xiran yihiin heerarka.
6. Qaab dhismeedka raagaya, wax tayo sare leh
7. Heerkulka: -20 ° C ~ -30 ° C ama -10 ° C ~ -18 ° C ama 8 ° C ~ -5 ° C8. Baaxadda: Customization
4.qolka qaboojinta faa'iidada keydinta qabowga
1) waxqabadka ka hortagga dabka oo aan dhalaalin marka wax gubanayaan
2) kala duwanaanta dalabyada heerkulka, qandaraaska yar ee xitaa jawiga hooseeya iyo jilicsanaanta.
3) aan sun lahayn oo aan qosol lahayn, iyadoo la raacayo shuruudaha ilaalinta deegaanka ee gobolka
qolka qabow qolladaha keydka qabow ee dhumucda badanaa waxaa loo sameeyaa iyadoo loo eegayo qolka qolka, oo cabirka ayaa la habeyn karaa.
5. Shaxda hoose waxay muujineysaa qolka hurdada iyo baahida dhumucda looxyada:
Qolka kuleylka Dhumucdiisuna waxay guddi (mm)
1. Khudaarta, Qaboojiyaha Kaydinta Miro (0-5′C)
2 Cabbitaanno, Biir Ku Soco Qaboojiye (2-8′C)
3. Hilib, Kaydinta Kalluunka (-18′C)
4. Meeldhexaadka ah Kaydinta Daawada (2-8′C)
5. Talaajo Kaydinta Daawada (-20′C)
6.Meat, Qaboojiyaha Qaraxa Kalluunka (-35′C)
6 .Waxay soo saartaa sawirro
7 Xaaladda amarada macaamiisha
FUJIAN CENTURY SEA GROUP CO., LTD. (CSC GROUP) oo ku taal magaalada FUZHOU ee gobolka FUJIAN, waxaa la aasaasay 2005, koox wadarta maalgashi ka badan 80 milyan yuan.
CSCPOWER ICE MAKIINADDA CO., LTD r & d iyo soo saarida mashiinka barafka waxaa ka mid ah taxanaha mashiinka barafka flake, taxanaha mashiinka barafka tuubada, taxanaha mashiinka barafka, taxanaha mashiinka barafka, taxanaha mashiinka barafka iyo qolka qabow, xirxirida mashiinka barafka, jajabka barafka. , qaboojinta system.etc, qalab dhammaystiran oo qalabka qaboojiyaha ah, oo laga sameeyay ka-hor-iibinta taageerada, naqshadeynta, soo-saarista, xirmooyinka dhammaystiran ee rakibidda iyo ka-goynta, tababarka macaamiisha, iwm oo ah qalab injineernimo iyo adeeg farsamo oo dhammaystiran. Wax soo saarka waxaa badanaa loo isticmaalaa supermarket cusub, isbitaal, dekedda, warshadaha kiimikada, isku dhafka shubka, kalluumeysiga badda-qoto dheer, soo saarida badeecooyinka biyaha, Warshad ballaaran oo la qaboojiyay codsiyada warshadaha iyo ganacsiga
Dhibcaha CSCPOWER waxaa hubiyay shirkadda maaliyadeed ee ALIBABA.
CSCPOWER waxay dhaaftay qiimeynta dhaqaalaha (oo ay kujirto hubinta amaahda)
oo ay fulisay maaliyad ALIBABA, oo ay ku jiraan Bangiga Dadweynaha ee Shiinaha diiwaanada amaahda,
xogta ganacsiga, xogta habdhaqanka shabakada Alibaba, xaashida shirkadaha iyo shaqsiga, diiwaanka fulinta maxkamada.
waad naga aamini kartaa 100% oo aad amarka noo dhigi kartaa.
waad ku qanci doontaa tayadayada iyo adeeggayaga.
Hubinta Ganacsiga waxay ku siineysaa 100% difaac:
> 100% ilaalinta lacag bixinta
> 100% ilaalinta tayada alaabta
> 100% Ilaalinta shixnadaha-waqtiga
waad ku qanci doontaa tayadayada iyo adeeggayaga. toos u sameeyaha qaboojiyaha qaboojiyaha
Rakibaadda: waxaan tijaabin doonaa oo si fiican u rakibi doonaa mashiinka ka hor rarka, dhammaan qalabka dayactirka lagama maarmaanka ah, buugga hawlgalka iyo CD ayaa la siinayaa si loo hago rakibidda.
Waxaan sidoo kale u diri karnaa injineer si uu ugu rakibo qolka qabow goobta, laakiin iibsaduhu wuxuu u baahan yahay inuu bixiyo fiiso, dayuuradaha safarka, safarka iyo hoyga, iwm.
Bandhigyada Dibadda iyo Macaamiisha
Taariikhda macaamil ganacsi
Hadiyad adiga loogu talagalay
Maxaad u dooratay CSCPOWER
CSCPOWER waa soo saaraha ugu xirfada badan mashiinka barafka iyo qolka qabow ee Shiinaha.
CSCPOWER waa kooxda ugu horeysa ee alaab-qeybiyeyaasha dammaanad qaadka ganacsiga, oggolaanaya in loo hoggaansamo tayada wax soo saarka iyo waajibaadka dirista Qadarkayaga hubinta ganacsiga waa USD167000.
100% soo celinta qaddarka dammaanadda ganacsiga ee amarrada aan la kulmin gaarsiinta la isku raacay ama shuruudaha tayada.
Qiime kasta, fadlan ka jawaab su'aalaha hoose,
1. waa maxay qolkaaga keydinta qabow ee loo isticmaalo, cuntada, khudradda, hilibka, barafka ama kuwa kale?
2. waa maxay heerkulkaaga qolkaaga loo baahan yahay?
3. Waa maxay cabirka qolka keydinta qabow, dhererka, balaca, dhererka?
4.Ma u baahan tahay koronto-dhaliye? waxaan sidoo kale bixin karnaa dhammaan noocyada koronto-dhaliye, fadlan dhagsii www.cscpower.cn si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Haddii aad xiiseyneyso mashiinka kale ee barafka, fadlan ka fiiri sawirada soo socda xiriirka
waxaan raadineynaa wakiil adduunka oo dhan, ku soo dhawow inaad noo soo dirto emayl arinta wakiilka.
Hore: Tallaalka side caaga la qaadi karo ee gaadiidka caaga ah ee qabow ee caafimaad
Xiga: Takhtarka sare ee heerkulka sare ee tallaalka hydrotherapy isbitaalka ayaa lagu fariisiyey
qalabka bangiga dhiigga
Talaalka side caag la qaadi karo gaadiidka caag b ...